Fahazoana iTunes amin'ny Mac; aza kivy | Avy amin'ny mac aho
Fahazoana iTunes amin'ny Mac; aza kivy
Rehefa mamaky ny lohatenin'ity lahatsoratra ity ianao dia mety manontany tena ... Amin'izao fotoana izao, misalasala ve ianao ny amin'ny fomba fampifandraisana fitaovana iOS amin'ny iTunes amin'ny Mac na PC? Eny, ny zava-misy dia ny faran'ny herinandro lasa teo ny namana iray nividy iMac roa taona taorian'ny fananany iPhone. Toy ny ankamaroantsika, tonga tamin'ny tontolon'ny Apple tamin'ny alàlan'ny iPhone ianao, avy eo iPad Pro, ary ankehitriny iMac.
Nanavao hatrany ny iPhone sy ny iPad tamin'ny alàlan'ny OTA izy fa tsy nila solosaina ary rehefa nividy azy ireo dia vita ihany koa ny fanombohana azy ireo tsy nisy solosaina. Ny zava-misy dia rehefa namadika ny Mac izy ary nanao ny fanamboarana voalohany dia niomana izy hampifandray ny iPhone amin'ny iTunes hahafahany mampifanindriana mozika ary inona no nahagaga azy fa iTunes Nasehony azy ny hafatra teo amin'ny efijery izay nahatonga azy hiresaka tamin'ny tenany.
Rehefa nampifandray ny iPhone voalohany ianao iTunes, izy tenany mihitsy no nandefa efijery izay nomena safidy roa. Ny voalohany dia ny fametrahana ny iPhone ho iPhone vaovao ary ny faharoa dia ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone miaraka amina backup misy. Alohan'ity efijery ity Ny fihetsiny teo no ho eo dia ny fanapahana ny iPhone amin'ny iTunes noho ny tahotra ny famafana ny data ao aminy.
Nifandray tamiko izy avy eo ary nanazava ny zava-nitranga. Ara-dalàna raha mieritreritra izay noeritreretiny izy ary tsy mazava io fomba fandidiana io. Te hizara aminao aho, raha tsy azonao antoka koa, fa rehefa milaza i iTunes fa hamboary ny iPhone ho iPhone vaovao dia midika izany fa hamboariny ho iPhone vaovao izay mifandray amin'i iTunes io, izany, araka ny efa fantatrao, dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny tranomboky iTunes ihany.
Rehefa, ny mifanohitra amin'izany no tsindrio, mamerina amin'ny backup iray, mamafa ny iPhone ny rafitra ary mamerina ilay kopia izay lazainay azy ny rafitra. Noho izany, tsy maintsy mazava isika fa izay ambaran'ny iTunes amintsika dia, amin'ny fiteny mora azo, te handao ny iPhone ve ianao ary hifandray amin'ny iTunes sa te-hamafa azy ianao ary hanomboka indray?
Rehefa mampifandray iPhone na iPad voalohany amin'ny iTunes ianao, raha tsindrio ny hoe Set up as a new iPhone, dia tsy mamafa ny data ao aminy.
Etsy ankilany, raha ampifandraisina amin'ny iTunes ny fitaovana iOS dia azonao atao ny mampifandray azy amin'ny alàlan'ny WiFi. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ampifandraisinao ilay fitaovana, ampidiro amin'ny alàlan'ny iTunes sy amin'ny efijery lehibe, midina amin'ny toerana ahafahanao mampihetsika ny fampifanarahana amin'ny alàlan'ny WiFi. Hanao andian-dahatsoratra mifandraika amin'ny fampandehanana iTunes aho ho an'ireo rehetra mbola manana fisalasalana miaraka aminy sy hanazava ny vaovao izay efa tafiditra ao amin'ireo kinova farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » High Sierra macOS » Fahazoana iTunes amin'ny Mac; aza kivy
Tsy ny HomePod irery no mpandaha-teny mahay mamela ny dian-tanan'ny tanana